राजा वीरेन्द्रको निवास श्रीसदन सर्वसाधारणलाई खुला : के–के छ श्रीसदनमा ? – bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > राजा वीरेन्द्रको निवास श्रीसदन सर्वसाधारणलाई खुला : के–के छ श्रीसदनमा ?
६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी आवासगृह श्रीसदन आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा अवस्थित श्रीसदन अवलोकनका लागि खुला गरिएको हो ।
१४ मंसिर २०७७, आईतवार ११:०१ bampijhyala 0
१४ मंसिर, बाँपीझ्याला, रत्नननगर । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री...
१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०९:१५ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । चिनियाँ रक्षामन्त्री एवं पहिलो बरियताका स्टेट...
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ११:१८ bampijhyala 0
के राजनीति भनेको नामको खेल मात्र हो ? अभिनेत्री रेखा !
११ मंसिर, बाँपीझ्याला, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालीकाले रत्नपार्कको नाम...
१४ मंसिर २०७७, आईतवार १०:४८ bampijhyala
चिनियाँ विदेशमन्त्री वेइ सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा ६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१३
बायर्नको पुनरागमन जित र डर्टमुन्डको हार ६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१३
कृषि क्षेत्र सुधारका लागि जङ्गी नीति आवश्यक : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल ६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१३
माथिल्लो हुम्लाका बासिन्दा टिप्परमा जोखिमका साथ यात्रा गर्न बाध्य ६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१३
२० सदस्यि प्रतिनिधी मण्डल सहित चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्गे काठमाडौंमा ६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:१३